Inona no Hanampy Antsika Hanompo An’i Jehovah Tsy Misy Nenina? | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Venda Vietnamianina Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
“Manadino ny zavatra any aoriana aho ary mikely aina hanatratra ny eo aloha.”—FIL. 3:13.
TADIAVO IRETO HEVI-DEHIBE IRETO:
Inona no nanampy ny apostoly Paoly mba tsy hieritreritra be momba ny ratsy nataony taloha?
Inona no toromarik’i Jehovah tokony harahintsika, raha te hilamin-tsaina isika?
Inona no toro lalana manampy antsika hanompo an’i Jehovah tsara, tsy helingelenin’ny nenina intsony?
1-3. a) Inona no atao hoe nenina, ary inona no mety ho vokatry ny nenina eo amintsika? b) Inona no ianarantsika avy amin’ny ohatr’i Paoly?
“TAHAKA IZAY!” Nilaza ny poety iray atao hoe J. Whittier fa io no teny mampalahelo indrindra amin’ny teny lazain’ny olona na soratany. Milaza an’io teny io ny olona rehefa manenina, ka te hanova ny zava-nitranga tamin’ny lasa. Ny teny hoe “nenina” dia midika hoe alahelo ao an-tsaina na adin-tsaina noho ny zavatra natao na tsy natao. Mety hidika koa izy io hoe “mitomany indray.” Azo inoana fa efa nanenina daholo isika, ka raha azo naverina ny lasa, dia novantsika ilay zavatra tsy nety. Mahatsapa toy izany koa ve ianao?
2 Nanao fahadisoana lehibe ny olona sasany, ary misy aza nanao fahotana lehibe. Ny hafa indray tsy nanao fahadisoana be, saingy misalasala izy hoe tena nety ve ny safidy nataony teo amin’ny fiainana. Misy olona sasany nahavita nanadino ny lasa, ary manohy ny fiainany. Ny hafa indray miady saina foana hoe: “Raha mba izao mantsy no nataoko!” (Sal. 51:3) Ary ianao? Inona no tsapanao? Tianao ve raha afaka manompo an’i Jehovah tsara ianao manomboka izao, fa tsy helingelenin’ny nenina? Misy ohatra tsara momba izany ao amin’ny Baiboly, dia ny apostoly Paoly.
3 Nanao fahadisoana lehibe i Paoly teo amin’ny fiainany, nefa nanao safidy tsara koa izy. Nanenina tongotra aman-tanana izy noho ny zavatra ratsy nataony, kanefa niezaka mafy izy tatỳ aoriana mba tsy hivadika amin’i Jehovah mihitsy. Andeha hodinihintsika ny ohatra navelany, mba hanampiana antsika hanompo an’i Jehovah tsara, fa tsy helingelenin’ny nenina.
NY FIAINAN’I PAOLY TALOHA
4. Inona no ratsy nataon’i Paoly ka nanenenany tatỳ aoriana?
4 Nanenenan’i Paoly ny zavatra nataony tamin’izy mbola tanora sy Fariseo. I Saoly no nahalalana azy tamin’izany. Izy no nitarika ny fanenjehana mivaivay natao tamin’ny mpianatr’i Kristy. Milaza ny Baiboly fa ‘nihetraketraka mafy tamin’ny fiangonana izy’, taorian’ny namonoana an’i Stefana. “Nitety trano izy ary notaritaritiny hivoaka ny mpino na lahy na vavy, ka nataony am-ponja.” (Asa. 8:3) Hoy ilay manam-pahaizana atao hoe Albert Barnes: “Mahery be ilay teny grika nadika hoe ‘nihetraketraka mafy.’ Asehon’izy io fa romotra toy ny bibidia i Saoly rehefa nanenjika ny fiangonana. Tena nafana fo be izy ary feno hatezerana.” Jiosy nafana fo i Saoly, ka nino izy fa andraikiny teo anatrehan’Andriamanitra ny namongotra ny Fivavahana Kristianina. Tena nahery setra tamin’ny Kristianina àry izy. ‘Norahonany sy notadiaviny haripaka’ izy ireo, “na lahy na vavy.”—Asa. 9:1, 2; 22:4. *
5. Nahoana i Saoly no tsy nanenjika ny Kristianina intsony, fa lasa nitory momba an’i Kristy?
5 Nikasa ho any Damaskosy i Saoly, mba hitaritarika an’ireo mpanara-dia an’i Kristy avy tao an-tranony, ary hitondra azy ireo ho any Jerosalema, ho eo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy. Tsy nahomby anefa izy, satria nanakana azy i Jesosy, ilay Lohan’ny fiangonana. (Efes. 5:23) Niseho taminy teny an-dalana ho any Damaskosy i Jesosy, ary lasa tsy nahita izy noho ny hazavana avy tany an-danitra. Naniraka azy ho any Damaskosy i Jesosy avy eo mba hiandry ny toromarika manaraka, ary fantatsika ny tohiny.—Asa. 9:3-22.
6, 7. Inona no mampiseho fa takatr’i Paoly ny fahadisoana lehibe nataony taloha?
6 Niova i Paoly rehefa lasa Kristianina. Tsy fahavalon’ny Kristianina intsony izy, fa lasa mpanohana mafana fo azy ireo. Hoy anefa izy tatỳ aoriana: “Mazava ho azy fa efa renareo izay nataoko fony aho mbola nanaraka ny Fivavahan’ny Jiosy, fa tafahoatra loatra ny nanenjehako sy ny nandravako tsy an-kijanona ny fiangonan’Andriamanitra.” (Gal. 1:13) Mbola nilaza an’ireny zavatra nataony taloha ireny ihany izy, rehefa nanoratra ho an’ireo Korintianina sy Filipianina ary ho an’i Timoty. (Vakio ny 1 Korintianina 15:9; Fil. 3:6; 1 Tim. 1:13) Tena nahamenatra azy izy ireny, kanefa tsy nodiany tsy fantatra na izany aza. Takany tsara fa nanao fahadisoana lehibe izy.—Asa. 26:9-11.
7 Nilaza ny manam-pahaizana momba ny Baiboly atao hoe Frederic Farrar, fa “tena nahatsiravina” ny zavatra nataon’i Paoly. Rehefa takatsika tsara ny haratsin’ny zavatra nataony, dia “ho azontsika ny hamafin’ny nenina tsapany tatỳ aoriana. Ho takatsika koa fa tsy maintsy nisy fahavalo ratsy fanahy nanesoeso azy, tamin’ireny zavatra nataony taloha ireny.” Rehefa nitsidika fiangonana koa i Paoly, dia mety ho nanatona azy ny rahalahy sambany vao nahita azy, ka nilaza hoe: ‘Hay ianao no Paoly! Ianao ilay nanenjika ny Kristianina taloha!’—Asa. 9:21.
8. Inona no tsapan’i Paoly momba ny famindram-po sy ny fitiavana nasehon’i Jehovah sy Jesosy azy, ary inona no ianarantsika avy amin’izany?
8 Takatr’i Paoly anefa fa noho ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan’Andriamanitra no nahafahany nanao ny fanompoany. In-90 eo ho eo izy no niresaka an’io toetran’i Jehovah io, ao amin’ireo taratasy 14 nosoratany. Tsy nisy olon-kafa nanoratra Baiboly nanao toy izany. (Vakio ny 1 Korintianina 15:10.) Tena nankasitrahan’i Paoly ny famindram-po naseho taminy, ary tiany haseho amin’ny atao izany. “Niasa mafy mihoatra” noho ny apostoly hafa rehetra àry izy. Inona no ianarantsika avy amin’izany? Raha manao toa an’i Paoly isika, ka mino ny soron’i Jesosy sy miaiky ny helotsika ary tsy manao ratsy intsony, dia vonona hamela ny helotsika i Jehovah, eny fa na dia fahotana lehibe aza ilay izy. Tadidio ny ohatr’i Paoly, raha mihevitra ianao fa lehibe loatra ny fahotanao, ka tsy ho voavela amin’ny soron’i Jesosy. (Vakio ny 1 Timoty 1:15, 16.) I Paoly aza nanenjika be an’i Jesosy nefa afaka nilaza hoe: ‘Efa tia ahy ny Zanak’Andriamanitra, ka nanolotra ny tenany ho ahy.’ (Gal. 2:20; Asa. 9:5) Tsapan’i Paoly fa nila nanao izay tsara indrindra vitany eo amin’ny fanompoana izy, mba hahatonga azy tsy helingelenin’ny nenina intsony. Miezaka manao toa azy koa ve ianao?
Niezaka nanao izay tsara indrindra ho an’i Jehovah i Paoly, mba tsy hisy zavatra hanenenany intsony any aoriana
MISY ZAVATRA ANENENANAO VE?
9, 10. a) Nahoana no manenina ny mpanompon’i Jehovah sasany? b) Nahoana no tsy tsara ny mieritreritra be foana momba ny zavatra tsy nety natao?
9 Nisy zavatra nataonao ve ka anenenanao izao? Manenina ve ianao satria nandanilany foana ny fotoananao sy ny herinao tamin’ny zavatra tsy tena lehibe? Nisy zavatra nataonao ve ka nisy vokany ratsy tamin’ny hafa? Sa zavatra hafa mihitsy no anenenanao? Inona àry no azonao atao raha izany no tsapanao?
10 Olona maro no mieritreritra foana an’ilay zavatra tsy nety nataony, ka miady saina. Mampijaly ny tenany ny olona toy izany, ka lasa mitebiteby be. Ho voavaha ve anefa ilay olana, raha ilay zavatra tsy nety foana no eritreretina? Tsia. Azo ampitahaina amin’ny ankizy iray misavily amin’ny tady iray mifatotra amin’ny hazo izany. Miezaka manetsika an’ilay tady izy mba handrosoany, kanefa na mihetsiketsika tontolo andro aza izy dia ho lany hery fotsiny, satria mandroso sy miverina eo fotsiny ilay tady. Tsy ho lasa lavitra mihitsy ilay ankizy. Toy izany koa fa tsy hahavita inona ianao, raha mieritreritra foana an’ilay zavatra tsy nety. Miezaha mafy kosa hamaha an’ilay olana. Raha nanafintohina olona, ohatra, ianao dia mandehana miala tsiny aminy, ary miezaha hamitram-pihavanana. Eritrereto ny antony nahatonga anao hanao fahadisoana, mba tsy hahatonga anao hamerina an’ilay izy intsony. Indraindray koa anefa dia mila miaritra fotsiny ny vokatry ny nataonao ianao. Na ahoana na ahoana anefa, dia tsy manampy anao ny hoe mieritreritra foana an’ilay zavatra tsy nety. Manakana anao tsy hanompo an’i Jehovah amin’ny fomba feno izany, sady tsy misy soa azo avy amin’izany mihitsy.
11. a) Inona no tokony hataontsika, raha tiantsika haneho fitiavana sy hamindra fo amintsika i Jehovah? b) Inona no toromarik’i Jehovah tokony harahintsika, raha te hilamin-tsaina isika fa tsy hiady saina foana noho ny fahadisoantsika taloha?
11 Ny olona sasany indray manamelo-tena be noho ny zavatra tsy mety nataony taloha, ka mahatsapa ho tsy mendrika eo anatrehan’i Jehovah. Mihevitra izy fa tsy hamindra fo aminy i Jehovah, satria lehibe loatra ny fahadisoany na nanao fahadisoana matetika loatra izy. Ny marina anefa dia hoe afaka mibebaka sy miova ary mangata-pamelana izy, na inona na inona fahadisoany tamin’ny lasa. (Asa. 3:19) Haneho fitiavana sy hamindra fo aminy i Jehovah, toy ny efa nataony tamin’ny olona maro hafa. Mamela heloka i Jehovah rehefa hitany hoe manetry tena sy mitsotra ny fahadisoany ny olona iray, ary tena mibebaka. Namela an’i Joba, ohatra, izy, rehefa hitany fa tena nanenina tamin’ny fahadisoana nataony i Joba. (Joba 42:6) Tokony hanaraka an’ity toromarik’i Jehovah ity isika raha te hilamin-tsaina: “Izay nandika lalàna ka manarontsarona ny nataony dia tsy hahomby, fa izay miaiky heloka sy miala amin’izany kosa no hamindrana fo.” (Ohab. 28:13; Jak. 5:14-16) Mila miaiky ny fahadisoantsika amin’Andriamanitra àry isika, mivavaka mba hahazo famelan-keloka, ary miezaka manitsy ny tsy mety. (2 Kor. 7:10, 11) Raha manao an’ireo isika, dia hamindra fo amintsika i Jehovah, izay “tena mamela heloka tanteraka.”—Isaia 55:7.
12. a) Ahoana no hanahafantsika an’i Davida raha manenjika antsika ny eritreritsika? b) Inona no dikan’ilay hoe manenina i Jehovah, ary nahoana no mampahery antsika ny mahalala izany? (Jereo ny efajoro.)
12 Tena misy heriny lehibe ny vavaka. Namboraka ny tao am-pony tamin’ny vavaka i Davida, ary nino izy fa hamaly izany i Jehovah. Voarakitra ao amin’ny bokin’ny Salamo ny vavaka nataony. (Vakio ny Salamo 32:1-5.) Niaiky izy fa nijaly izy tamin’izy nanafina ny fahotany, satria nanenjika azy ny eritreriny. Nitebiteby izy vokatr’izany, narary, ary nalahelo. Ahoana no nahazoan’i Davida famelan-keloka sy fiadanan-tsaina? Niaiky ny helony tamin’i Jehovah izy. Namaly ny vavaka nataony i Jehovah, ary nanampy azy mba ho maivamaivana sy hanohy hanao ny tsara. Toy izany koa fa raha miady saina ianao noho ny zavatra tsy nety nataonao taloha, dia manaova vavaka vokatry ny fo mba hahazoana famelan-keloka, ary ahitsio araka izay azonao atao ilay zavatra tsy nety. Raha manao izany ianao, dia afaka matoky fa hihaino tsara ny fitalahoanao i Jehovah, ary hamela anao.—Sal. 86:5.
MIFANTOHA AMIN’NY HOAVY
13, 14. a) Inona no tena tokony hifantohantsika? b) Inona no fanontaniana manampy antsika handini-tena?
13 Mahasoa ny mitodika ny lasa raha ianaran-javatra. Mila mibanjina ny hoavy anefa isika, raha tiantsika handeha tsara ny fiainantsika. Tsy tokony hieritreritra be momba ny zavatra tsy nety nataontsika tamin’ny lasa àry isika, fa tokony hifantoka amin’ny ankehitriny sy ny hoavy. Diniho hoe inona no zavatra ataonao amin’izao fotoana izao sy ny zavatra tsy ataonao, ka mety hanenenanao rehefa afaka taona maro. Eritrereto hoe miezaka foana ve ianao mba tsy hivadika, mba tsy hisy na inona na inona hanenenanao amin’ny hoavy.
14 Efa tena akaiky ny fahoriana lehibe. Tsy tiantsika anefa ny hiady saina, amin’izay fotoana izay, hoe: ‘Sao dia tokony ho nanompo bebe kokoa àry aho taloha nefa tsy nanao? Nahoana àry aho no tsy nirotsaka ho mpisava lalana tamin’ilay fotoana nahafahako iny? Fa inona no nisakana ahy tsy hiezaka ho lasa mpanampy amin’ny fanompoana? Tena niezaka nitafy ny toetra vaovao ve aho? Hitan’i Jehovah hoe mendrika hiaina ao amin’ny tontolo vaovao ve aho?’ Tsy natao hampanahy anao ireo fanontaniana ireo, fa tokony hampiasainao handinihan-tena sy hanaovana izay tsara indrindra amin’ny fanompoana an’i Jehovah. Raha tsy izany, dia mbola hanao zavatra tsy mety ihany ianao, ka hanenina any aoriana.—2 Tim. 2:15.
AZA MANENINA NOHO NY SORONA NATAONAO
15, 16. a) Inona no nafoin’ny olona maro mba hanaovana ny fanompoana an’i Jehovah ho loha laharana? b) Nahoana isika no tsy tokony hanenina mihitsy amin’izay sorona nataontsika ho an’i Jehovah?
15 Nahafoy zavatra ve ianao mba hanompoana an’i Jehovah manontolo andro? Angamba ianao nahafoy asa tsara na raharaham-barotra nandeha be, mba hanatsorana ny fiainanao sy hanompoana bebe kokoa. Tsy nanambady koa angamba ianao, na raha manambady dia nifidy ny tsy hiteraka, mba hanompoana ao amin’ny Betela, na hanaovana fanorenana, na asan’ny faritra, na asa misionera. Mety ho efa mandroso izao ny taonanao, ka moa ve ianao tokony hanenina amin’ireny safidy nataonao ireny? Tokony hihevitra ve ianao hoe tsy nilaina ireny sorona nataonao ireny, ary tsy nety ny fotoana nanaovanao azy? Aza mieritreritra toy izany mihitsy!
16 Tena tia an’i Jehovah sy te hanampy ny olona hanompo azy ianao, ka izany no nahatonga anao hanao an’ireny sorona ireny. Aza mieritreritra àry hoe ho tsara kokoa ny fiainanao raha tsy nanao azy ireny ianao. Tokony ho afa-po tanteraka ianao satria fantatrao fa nanao izay hitanao fa nety indrindra ianao, araka izay toe-javatra nisy anao. Tokony ho faly ianao satria nanao izay tsara indrindra mba hanompoana an’i Jehovah. Tsy hohadinoin’i Jehovah ny sorona nataonao ho azy. Mbola hanome anao fitahiana tsara lavitra noho izay eritreretinao aza izy, rehefa hahazo ny tena fiainana ianao!—Sal. 145:16; 1 Tim. 6:19.
INONA NO AZONTSIKA ATAO MBA TSY HAHATONGA ANTSIKA HANENINA?
17, 18. a) Inona no toro lalana nianaran’i Paoly, ka nanampy azy hanompo an’i Jehovah tsara, tsy helingelenin’ny nenina intsony? b) Tapa-kevitra ny hanao inona ianao, momba ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy?
17 Inona no toro lalana nianaran’i Paoly, ka nanampy azy hanompo an’i Jehovah tsara, tsy helingelenin’ny nenina intsony? Nilaza izy hoe tsy nieritreritra be intsony momba ny zavatra tsy nety taloha izy, fa niezaka mafy hahazo ny loka. (Vakio ny Filipianina 3:13, 14.) Niezaka izy mba tsy hifantoka tamin’izay tsy nety nataony, tamin’izy tao amin’ny Fivavahana Jiosy. Nanao izay rehetra azony natao kosa izy mba hahazoana ny loka, dia ny fiainana mandrakizay.
18 Afaka mampihatra ny toro lalana ao amin’ny tenin’i Paoly koa isika rehetra. Tsy tokony hanahy be momba ny lasa izay tsy azo ovana intsony isika, fa tokony hiezaka mafy hahazo ny fitahiana amin’ny hoavy. Marina fa mety tsy ho hadinontsika ny fahadisoantsika, kanefa tsy tokony hanamelo-tena foana amin’izany isika. Afaka miezaka isika mba tsy hifantoka amin’ny lasa, fa hanompo an’i Jehovah araka izay tsara indrindra vitantsika, ary hifantoka amin’ilay hoavy mahafinaritra miandry antsika!
^ feh. 4 Imbetsaka ny Baiboly no milaza fa anisan’ny nenjehin’i Saoly ny vehivavy. Midika izany fa nandray anjara lehibe tamin’ny asa fitoriana tamin’ny taonjato voalohany ny vehivavy, toy ny ankehitriny ihany.—Sal. 68:11.
INONA NO DIKAN’NY HOE MANENINA I JEHOVAH?
Imbetsaka ny Baiboly no milaza fa ‘nanenina’ i Jehovah. (Jona 3:10; Gen. 6:6, 7; Mpits. 2:18; 1 Sam. 15:11) Tsy hoe nanao fahadisoana anefa Andriamanitra matoa nanenina. Tonga lafatra mantsy ny zavatra ataony. (Nom. 23:19; Deot. 32:4) Ilay teny hebreo nadika hoe manenina dia midika koa hoe miova hevitra na manova izay kasaina hatao. Toy izany i Jehovah. Noho izy mahay mandanjalanja sy mahay milefitra ary mamindra fo, dia vonona izy hanova ny zavatra kasainy hatao amin’ny mpanao ratsy, raha mibebaka sy miova izy ireo.—Jer. 18:7-10.
Hizara Hizara Inona no Hanampy Antsika Hanompo An’i Jehovah Tsy Helingelenin’ny Nenina?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2013
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Janoary 2013